Boqor Salman: Falastiin Caasimadeeda Waa Qudus, Trump wuxuu u xaglinayaa Israel • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Boqor Salman: Falastiin Caasimadeeda Waa Qudus, Trump wuxuu u xaglinayaa Israel
Boqor Salman: Falastiin Caasimadeeda Waa Qudus, Trump wuxuu u xaglinayaa Israel
December 14, 2017 - By: Abdirizak Shiino
Boqorka Sacuudiga Salmaan oo Arbacadii shalay furay Kalfadhiga Golaha Shuurada ee dalkaasi ayaa khudbadiisa uga hadlay xaalada Falastiin, isagoo sheegay inay si buuxda u taageersan yihiin qadiyada Falastiin.
“…Waxaan ku baaqeynaa horeyna ugu baaqnay in xaquuqda shacabka Falastiin la xaqiijiyo isla markaana ay helaan Dowladooda iyo dalkooda u gaarka ah oo ay caasimad u tahay Qudus…” ayuu yiri Salmaan oo khudbadan soo jeediyey furitaanka kulanka sanadlaha ah ee Golaha Shuurada Sacuudiga.
Boqorka Sacuudiga ayaa shalay ka baaqday shirkii Istanbul ee dalalka Islaamka, shirkaasi ayaa waxaa Sacuudiga u matelayey wafdi ka socda Wasaarada Arrimaha Dibada.
Salaasadii ayuu Salman shir gaar ah la yeeshay Boqorka Urdun Cabdallah oo ay ka wadahadleen xaalada Falastiin, Boqor Cabdullahi ayaa kadib u duulay Istanbul oo uga qeyb galay shirkii Arbacadii shalay oo ay dalalka Islaamka ku sheegeen inay Qudus u aqoonsan yihiin Caasimada Dowlada Falastiin ee la heysto.
Waxaa jira shaki weyn oo laga qabo qorshaha Sacuudiga, maadaama Dhaxal Sugaha dalkaasi ee Maxamed Bin Salmaan uu xiriir fiican la leeyahay Xukuumada Trump ee Maraykanka, waxaana la sheegayaa in kooxda Trump ka dhaadhicisay Maxamed Bin Salmaan qorshe qarsoon oo aan illaa iyo hada la shaacin.
Maxamed Bin Salmaan ayaa kulamo qarsoodi ah magaalada Riyadh kula lahaa Lataliyaha Trump ahna wiilka uu Sodoga u yahay Trump ee Jared Kushner oo ah maalqabeen Yuhuud ah oo si weyn u taageera Israel, kahor intii aan Trump ku dhawaaqin Go’aankiisa Qudus. Kushner ayaa sidoo kale ah Wakiilka Trump u qaabilsan arrimaha Bariga Dhexe.
Donald Trump ayaa dhinaca kale sheegay inuu taageersan yahay Maxamed Bin Salman siyaasadiisa ku aadan Qatar, IRAN iyo waliba ololaha uu xabsiga ku dhigay Bin Salmaan in badan oo kamid aha Amiirada Qoyska Boqortooyada.
Dhaxal Sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salman ayaa ahmiyadiisa koowaad ka dhigtay la dagaalanka IRAN isla markaana la sheegay in uu doonayo inuu Maraykanka u adeegsado dagaal ka dhan ah IRAN, arrintaasina waxaa sidoo kale ku taageersan Israel oo u aragta IRAN khatarta ugu weyn oo kasoo wajaheysa dhaq dhaqaaqa ay kawado Tehran dalalka Siiriya iyo Lubnaan.
Maxamed Bin Salman oo aaminsan in Sacuudiga uu hogaamiyo dhamaan dalalka Carabta ayaa ku guuleysan waayey dagaalka uu ka bilaabay wadanka Yemen iyo dagaalka Xuuthiyiinta, sidoo kale Sacuudiga ayaa ku khasaaray dagaalkii Siiriya, halka Lubnaan iyo Ciraaq ay gacanta ku hayaan Shiicada xiriirka fiican laleh IRAN.
Madaxweynaha IRAN Xassan Rouhani ayaa shirkii shalay ee Istanbul uga faa’iideystay ka maqnaanshaha shirkaasi ee Boqorka Sacuudiga, isagoo sheegay in go’aanka Trump ee Qudus loogu hibeeyey Israel ay tahay mid ay sabab u yihiin dalalka Carabta ah ee doonaya inay xiriirka la sameystaan Israel, inkastoo uusan Rouhani carabka ku dhufan si toos ah Sacuudiga iyo xulafadiisa.